Akhriso Xog Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Qaraxyada Sh/dhexe. – Bogga Calamada.com
Akhriso Xog Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Qaraxyada Sh/dhexe.
Qaraxa hore ayaa burburiyay gaari nooca tikinikada loo yaqaano oo uu watay sarkaal ka tirsanaa Maleeshiyada Murtadiinta, Waxaana ku dhintay sadex askari oo ilaala u ahayd sarkaalka la beegsaday. Iyadoo dhaawac halis ah uu soo gaaray sarkaalka oo magaciisa lagu soo gaabiyay Cali Xuubeey.
Shan kale oo ka tirsanaa Maleeshiyaatka Murtadiinta ayaa iyaguna sidoo kale dhaawacyo halis ah kasoo gaareen qaraxa lala beegsaday gaariga tiknikada ah.
Cali Xuubeey oo ahaa sarkaalka la beegsday ayaa xaaladiisu tahay mid aad u liidata. Waxaana qaraxa u si daran uga waxyeelleeyay qaybaha sare ee jiirkiisa. Waxuuna ahaa taliyaha maleeshiyaadka ku sugan deegaanka Gololeey, maleeshiyaadkan ayaa bilo ka hor isaga cararay deegaanka Cali Fooldheere ee duleedka Degmada Mahadaay.
Saacad kadib markii qaraxa lagu burburiyay gaariga Ninka sarkaalka ah la socday ayaa qarax kale lala eegtay ciidamo katirsan Kufaarta Afrikaanta oo gurmad ahaan ugu socday goobta sarkaalka lagu qarxiyay.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa xaqiijinaya in qaraxaas ay ku dhinteen ugu yaran 2 askari oo burundeys ah. Halka tirada dhaawacaay gaareeyso illa 15 askari.
Ciidamada Kufaarta ah ayaa qaraxa lala beegsaday iyagoo qaab efentari ahaan ah uga soo baxay saldhig ay ku leeyihiin deegaanka uu weerarku dhacay, kuna soo wajahan goobta lagu qaraxu ku haleeyay Murtadiinta.
Diyaarad ka timid dhanka Muqdisho aya dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxyada ka qaaday garoonka Magaalada Jowhar iyadoona udaabushay dhanka Xerada Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Saliibiyiintu ku leeyihiin Soomaaliya.
War rasmi ah oo shalay galinkii dambe kasoo baxay Xarakada Al Shabaab Al Mujaahidiin ayaa lagu sheegtay mas’uuliyadda qaraxa lagu beegsaday Saliibiyiinta Burundi iyo Maleeshiyaatka dabadhilifyada u ah ee Muratdiinta ah.
Goob joogayaal ku sugan deegaanka Gololeey ayaa sheegay in ciidamo ka baxay Balcad ay gaariga tiknikada ah oo burburay halkaas kasoo jiideen.
Wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa qarka usaaran in ay ka caagaan saraakiisha iyo maleeshiyaatka sababa laxiriira weerarada Mujaahidiinta oo joogta ka noqday.
Wadadan ayaa waxaa horey uga quustay isticmaalkeeda Masuuliyiinta kooxda ridada ah kadib markii qaar katirsan saaxiibadooda ay kawada tirsanaayeen Ridada lagu khaarijiyay kamiino ay Mujaahidiintu halkaas u dhigeen,
Bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii weerar ka dhacay isla duleedka Balcad lagu dilay Labo xildhibaan oo katirsana golaha dawaaqiida maamulka isku magacaabay HirShabelle iyo Toban askari oo ilaala u ahaa. Sidoo kale weerarkaas waxaa ku dhintay gudoomiye u xigeenkii maamulkaas ugu magacawnaa degmada Raaga-Ceelle iyo Sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaatka Murtadiinta ah